Amber Rose waxay ka hadlaysaa in Kanye West uu si guud u xoogsheegtay muddo 10 sano ah - Dhaqanka Pop
Amber Rose waxay ka hadlaysaa in Kanye West uu si guud u xoogsheegtay muddo 10 sano ah
Fiidiyowga iyada oo loo marayo No Jumper
Amber Rose waxay la xiriirtay Adam22 wareysi dheer oo ku saabsan Ma Jumper podcast -ka toddobaadkan inta ay ka hadlaysay xiisaha ay ka qabto madasha OnlyFans, jaceylka ay u qabto nolosha qoyska, iyo - si qoto -dheer u galay wada -hadalka - fekerkeeda ku saabsan sida Kanye West ay 'u cagajuglaynaysay' sanado.
'Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay MyFans -ka,' 'Rose ayaa tiri qiyaastii shan daqiiqo markii la wareysanayay markii la weydiiyay waxa ay ka shaqeyneysay goor dambe. 'Waad ogtahay, waxaan ahaa dharbaaxo muddo dheer. Aniguna waxaan dareemayaa inay tahay, waxay la mid tahay naadi xarig dhijitaal ah. Waa ii xiiso uun. Waxaan dareemayaa inaan ku laabanayo xididdadaydii. Waadna ogtahay, waxaan u malaynayaa in dad badani aysan jeclayn inay qirtaan laakiin - tusaale ahaan - markii aan ahaa dharbaaxada, falcelinta aan ka heli jiray markaan masraxa fuulayay? Runtii ma helaysid falcelintaas mar dambe qof caan ah. Waxaad helaysaa falcelin laakiin waxaad heshaa falcelin aad u kala duwan.
sida loo sameeyo dhadhanka keega sanduuqa si fiican u dhadhamiya
Goor dambe, Adam22 wuxuu la yaabay haddii Rose ay wax ka qaadatay xiriirkeedii hore ee Galbeedka oo la xiriirta kalsoonida iyo sida loo maro nolosha caanka ah. Rose waxay sheegtay inaysan 'waxba ka soo saarin' maxaa yeelay waa dad aad u kala duwan.
'Waxaan ahay qof naxariis badan,' ayay tiri qiyaastii 17 daqiiqo. '' Waxaan leeyahay naxariis. Waxaan ahay qof wanaagsan. Taasi waa sababta ay dadku ii jecel yihiin. Taasi waa sababta qof kasta oo aan waligay shukaansaday uu mar walba i jeclaa. Marnaba… Sababtoo ah waan ka fogaaday. Anigu ma ihi isaga oo kale. Waxba kama helin isaga. '
Isagoo ka hadlaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku xeeranaa xirfadda Galbeedka, oo ah soo dhaweyntiisa Trumpism, Rose waxay xustay inay tahay 'mid aan dan ka lahayn' laakiin 'ka welwelsan' meel fog. Iyadu sidoo kale lama yaabin isku -dheelitirka West'sTrump sababtuna waa xaqiiqda ah 'inay macno ahaan isku qof yihiin.'
Qiyaastii 20 daqiiqo gudahood, Adam22 waxay tixraacday iskudaygii dadweyne ee Galbeedka ee ceebaynta Rose, taas oo ay ku macneysay inay si fudud qayb uga tahay waxa maandheeyeyaashu dadka ku sameeyaan.
'Waan doortay,' ayay ka tiri xiriirka. 'Ma doonayo in noloshaydu sidaas noqoto. Anigu ma ihi qofka noocaas ah mana garanayo haddii uu wax u sheego si uu xaaskiisa ugu raaxaysto laakiin inuu i ceebeeyo oo i dhaho waxaad u baahan tahay 30 maydhasho? Waa sida, bro. [Wuxuu] i geeyay adduunka oo dhan. Sida, tan iyo goorma ayaad u baahan tahay 30 maydhasho? '
Ugu dambayntii, Rose waxay sharraxday, dadka ay ku noolayd muddadaas nolosheeda ma ahayn nooca iyada oo aan lahayn naxariis gaar ah. Waxay sidoo kale shaaca ka qaadday inay heshay dalabyo heshiis buug ah iyo soo jeedinno 'shit shit' oo la mid ah oo ku qotoma dib -u -sheegidda xilligii nolosheeda, in kasta oo samaynta waxaas oo kale aysan wax dan ah ugu jirin.
'Taasi ma iga farxin lahayd,' ayay tidhi. 'Xitaa haddii uu qof i soo qaadayo, kaas oo uu haystay 10 sano. Wuu i doortay. 10 sano ayuu i cagajugleeyay.
Rose ayaa muddo dheer ka soo wareegtay oo - iyada oo ereyadeeda u gaar ah - waxay weligeed ka hadashaa sanadihii ay la lahayd West markii wax laga weydiiyey wareysiyada maxaa yeelay waxay u dhigmaan 'qayb weyn' sababta ay caan u noqotay.
'Waad i caayaysaa,' ayay tidhi. 'Kaliya sii wad noloshaada.'
Dusha sare, qabso wareysiga Amber Rose x Adam22 oo dhan 47 daqiiqo.
sida loo sameeyo buuxinta pie peach cusub
maxaad u baahan tahay si aad u samaysato orso gummy ah
kubo iyo labada xadhigba dhibco
cuntada ugu fiican strawberry cake ee dunida